गलेश्वर, ७ चैत । यसै त वसन्त ऋतु, त्यसमाथि पनि वनैभरि ढकमक्क फुलेका लालीगुँरास । लालीगुराँसकै छेडोबाट देखिने सेताम्यै हिमाल र मनमोहक प्राकृतिक छटा । म्याग्दीका लेकाली भूगोलमा अहिले बेग्लै रौनक थपिएको छ ।
छिमेकीको खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएका ३३ वर्षीय युवकको उपचारको क्रममा मृत्यु !
कुन दिशातर्फ फर्केर खाना पकाउन उत्तम ? जान्नुहोस् !